Feral Inopindirana inounza kwatiri Mumvuri WeGuva Raider Rakajeka Shanduro | Linux Vakapindwa muropa
Feral Inopindirana inounza kwatiri Mumvuri weTomb Raider Yakatsanangurwa Edhisheni
Feral Interactive Inoenderera nebasa rayo rekuunza mamwe mazita emuno mamwe mapuratifomu kuLinux neMac.Izvi zvinoita izvozvi ne Mumvuri WeGuva Raider Rinojekesa Edition. Izvi zvaziviswa zviri pamutemo, kuti iwe ugone kutamba natively kubva kune yako yaunofarira distro kune ino epic chiito uye yevhidhiyo mutambo wevhidhiyo. Sezvaunoziva, kana iwe uchida iyi saga yemutambo wevhidhiyo, iyo yekutanga inoburitswa naEnix uye yakagadzirwa naEidos-Montréal yeMicrosoft Windows uye mitambo yemitambo.
Chinyorwa chitsva chakabudirira kwazvo, chine protagonist iri Lara Croft ane mukurumbira, ine nyaya yepakutanga. Unotoziva kuti Tomb Raider uye Kumuka kweTomb Raider dzakaburitsirwawo GNU / Linux kare, saka ikozvino pane mazita matatu mune ino saga iwe yaunogona kutamba. Ino nguva, uchafanirwa kununura nyika kubva kuna Mayan apocalypse. Lara achafanirwa kuita basa rakakosha iri pamatanho kuMexico.
ari vhidhiyo yemitambo zviitiko zvinoshamisa, uye Lara Croft achafanirwa kubata nemigwagwa yepasi pemvura yemapako, makomo asina kuenzana kuyambuka, kuongorora makuva nemisungo inouraya, nezvimwe. Mutambo wakazara-gadzira nemifananidzo yakanaka kwazvo. Zvese zvakarongedzwa nekupindwa muropa nerudzi urwu rwemitambo, zvombo zvitsva uye zvinokanganwa DLCs, hunyanzvi hutsva, nezvimwewo, kuwedzerwa kumutambo uye kuve nezvakawanda zvirimo.
Kana iwe uchifarira, iwe unofanirwa kuziva kuti ndizvo inowanikwa muFeral Interactive chitoro, uye zvimwe zvitoro zvepamhepo. Zvinodikanwa kuve ne64-bit microprocessor uye inoshanda system, Ubuntu 18.04 shoma, 3.4 Ghz Intel Core i3-4130 / AMD yakaenzana kana yepamusoro microprocessor, 9 GB kana yakakwira AMD Radeon R285 680 mifananidzo kana NVIDIA GeForce GTX 2 kana kupfuura, uye hard disk nzvimbo ingangoita makumi mana GB. Nenzira, inoshanda neVulkan, uye Intel mifananidzo haina kutsigirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Feral Inopindirana inounza kwatiri Mumvuri weTomb Raider Yakatsanangurwa Edhisheni
Mhanya macOS Catalina paLinux nzira iri nyore
Byte, chishandiso chemimhanzi mune yakasarudzika iOS maitiro eApple